Guddoomiye Cirro Oo Ka Gows Adaygay Inuu Caddeeyo Waqtiga Uu Kursiga Wakiillada Ee Uu 12-ka Sano Ku Fadhiyey Ka Kacayo | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Guddoomiye Cirro Oo Ka Gows Adaygay Inuu Caddeeyo Waqtiga Uu Kursiga Wakiillada Ee Uu 12-ka Sano Ku Fadhiyey Ka Kacayo
London:(Hubaal)-Guddoomiyaha golaha wakiillada, ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro), ayaa mar kale ku guuldarraystay inuu bulshada u sheego waqtiga uu sida rasmiga ah uga degi doono kursiga guddoomiyenimo ee golaha wakiillada iyo weliba xubinnada oo uu muddo dheer soo hayey.
Guddoomiye Cirro oo isaga oo ku sugan dalka Ingiriiska waraysi siiyey Idaacadda VOA-da, ayaa diiday inuu ku dhawaaqo waqti cad uu xilkaas bannayn doono, maadaama oo uu doonayo inuu dalka madaxweyne ka noqdo, waxase uu si taxar leh u sheegay inuu mar uu kursigaas iskaga degi doono.
Isaga oo ka jawaabay su’aal nuxurkeedu ahaa waqtiga uu kursiga uu golaha Baarlamaanka ka hayo bannayn doono ee uu sida rasmiga ah ugu ban bixi doono murrashaxnimadiisa, ayaa waxa uu sheegay in xilliga sharcigu qorayo uun uu ka tegi doono, isaga oo muujiyey sida uu wlei usii jeclaysanayo xilalka dhawrka ah ee uu isku hayo.
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxa uu isaga oo arrimahaas ka hadlaya uu yidhi, “Sida sharcigu qorayo doorashad aka hor waa inaan ka tagaa xilka guddoomiyenimada wakiillada ee aan hayo, qof kasta oo xil haya oo doorasho u ordayana sharcigu waxa uu farayaa inuu muddo cayiman ka hor uu ka tago, aniguna muddadaas ka horna waan ka tegayaa haddii allah yidhaahdo.”
Guddoomiyaha xisbiga WADDANI, ayaa dabayaaqadii sanadkii 2015-tii loo doortay kursiga guddoomiyaha golaha Baarlamaanka, waxana uu waqti dambe noqday guddoomiyaha xisbiga WADDANI iyo weliba murrashaxa xisbigaas, balse sanado badan kadib waxa uu ku dhiirran la’yahay inuu kursiga wakiillada banneeyo oo uu u ban baxo xisbiga uu hoggaamiyo ee WADDANI.